Ahoana ny fomba hamahana ny olan'ny DRM amin'ny iTunes 12.2.1 | Vaovao IPhone
Ahoana ny fomba fanitsiana ny olan'ny DRM nanampy diso ireo hira iTunes Match
Apple dia namoaka fanavaozana iTunes ny alatsinainy teo izay nanitsy olana maromaro niainan'ny mpanjifa iTunes Match teo aloha. Ny tena matotra nanampy DRM (fiarovana) an'ireo hira izay tsy tokony satria efa tompon'ny mpampiasa. Ary ny tena ratsy indrindra, ny fiezahana manitsy azy, raha diso natao, dia mety hiteraka olana lehibe kokoa.
Rehefa manavao ny iTunes 12.2.1, ny kinova vaovao dia manitsy ny vaovao avy hatrany ary afaka miroso amin'ny fanamboarana ireo rakitra ianaofa tsy maintsy mitandrina isika mba tsy hikasika ny toerana tokony tsy hitoriantsika na mety ho sarotra ny mamerina ny fisie ataonay.
Ny fomba marina hamerenana ireo hiranay ho amin'ny fanjakany marina dia izao manaraka izao:
Ahoana ny fanamboarana ny olan'ny DRM nampiana diso
Hitanay ilay hira tianay haverina.
Izahay dia manao ctrl + tsindrio ao amin'ilay hira.
Misafidy isika Fafao ny fampidinana.
Izahay dia manao ctrl + cllick indray ary misafidy isika Fahafahana ivelany.
Tsy intuitive izy io ary, na dia manamboatra ny fanjakana misy azy aza ny iTunes 12.2.1, dia mbola miaraka amin'ny fiarovana FairPlay 2 DRM ny fisie izay nalainay teo aloha. Raha tsy mamafa ny fisintomana isika dia mamafa ilay hira, voafafa ihany koa avy amin'ny iCloud izany ary tsy mamela anay hisintona ilay rakitra intsony raha tsy misy fiarovana etsy ambony.
Raha hamafana tsy nahy ny hira novidiana ianao dia azo averina. Ho an'ity dia handeha ho any aminay izahay Kaonty / fampahalalana kaonty iTunes / iTunes ao amin'ny rahona / fividianana miafina / fitantanana. Ho hitantsika eo ireo rakikira sy hira voafafa rehetra. Tsy maintsy tsindrio ny bokotra "aseho". Manaraka izany, tsy maintsy mandeha any amin'ny safidin'i iTunes isika, esory ny iCloud Music Library ary ekeo.
Dia efa azontsika atao ny misintona ireo hira amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kisary rahona. Avy eo averinay indray ny tranomboky mozika iCloud ary ekentsika. Hiverina any amin'ny tranombokinao ireo hira ireo nefa tsy misy fiarovana DRM hihainoana azy amin'ny fitaovana tiantsika kokoa.
Raha tsy maintsy milaza ny marina aho dia heveriko fa tokony handefa fitaovana i Apple mba hahavitana mandeha ho azy izany rehetra izany fa tsy hamoahana fotsiny antontan-taratasy manohana. Rehefa hitanay izay nisintona ny kapila U2 maimaim-poana fa tavela tao amin'ny tranombokinay izany, afaka nanafina ny fividianana tamin'ny fitaovana na rohy izahay, tsy tadidiko tsara izany sao tsy hanelingelina anay. Ny zavatra tsara indrindra dia ny handefasan'ny Apple fampiharana kely hanatanterahana ny fizotrany rehetra mba hahafahan'ny olona manao azy io amin'ny fomba azo antoka, haingana sy milamina. Raha tsy izany dia heveriko fa betsaka ny olona manana olana lava ary ho very ny hirany mandrakizay ireo mpampiasa sasany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fomba fanitsiana ny olan'ny DRM nanampy diso ireo hira iTunes Match
888Sport, fampiharana iray hanaovana filokana amin'ny iPhone
Ahoana ny fomba fampidinana kinova taloha amin'ny fonosana Cydia